★INDAWO ENGAYIKHOLEKILE★ Ifulethi eliseduze ne-JMC Airport 3
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Alejandro
U-Alejandro unokuphawula okungu-3002 kwezinye izindawo.
Isakhiwo seMall Puerto Bulevar siyindawo ephephile nenethezekile, esendaweni ekahle esendaweni emaphakathi kakhulu e-Llangrande, etholakala endaweni eyi-golden mile ye-llanogrande, ngaphakathi kwenxanxathela yezitolo, eduze kwesitolo esikhulu kanye eduze nezindawo eziningi zokudlela, isikhungo sokuthenga saseJardines (imizuzu emi-5 walk) kanye nama-ATM. Kuseduze kakhulu nesikhumulo sezindiza i-Jose Maria Cordoba, indawo egcwele i-gastronomy nokuphila kwasebusuku.
Leli fulethi elibekwe kahle esitezi sesi-4 sebhilidi le-MALL PUERTO BULEVAR.
Ifulethi lisuka ku-25-30m2 futhi linekamelo lokulala elingu-1 elinombhede ophindwe kabili onamashidi ombhede namathawula, ikhabethe, i-TV, i-WIFI, igumbi lokugezela elilodwa. umshini wokuwasha. Ikhishi lihlome ngokugcwele isiqandisi, isitofu sikagesi, i-coffeemaker, i-blender kanye namathuluzi ayisisekelo owadingayo ukupheka noma ukujabulisa ekhaya.
Nendlu yokudlela enezihlalo ezine. Lesi sakhiwo sitholakala eLlanogrande, izingadi zenxanxathela yezitolo. Futhi, uzothola izindawo zokudlela eziningi, amabhange, izitolo zezidakamizwa, izitolo ezinkulu ezifana ne-Euro ne-carulla, nezitolo zezitolo.
Ngeke nje ngikunikeze izindlu ezinethezekile, ezihlome ngokugcwele futhi amanani amahle, kodwa futhi nezimpendulo ezisheshayo kanye nokunaka yonke imibuzo yakho nezicelo ongaba nazo lapho uhlala khona. Ngizotholakala 24/7. Singabagqugquzeli bezokuvakasha okuhle, sikholelwa ukuthi iMedellin inamandla okwenza noma yimuphi umuntu athandane nezindawo zayo namasiko, sibheka abantu abafuna ukuza ukuzobona iMedellin egcwele inqubekelaphambili nezindawo ezinhle.
3.43 ·7 okushiwo abanye
3.43 · 7 okushiwo abanye
-Isakhiwo sitholakala eLlanogrande, uhambo olufushane oluya ezindleleni ezinkulu nasezikhungweni zezitolo. Igrosa iseduze kwesakhiwo uma kudingeka. Futhi, uzothola izindawo zokudlela eziningi, amabhange, izitolo zezidakamizwa, izitolo ezinkulu ezifana ne-Euro ne-Carulla, nezitolo zezitolo.
- 100 Meters Gardens yezitolo
- Izindawo zokudlela ezingama-50 Meters (Della nona, crepes and waffles, Corral)
- 5 km sezindiza uJose Maria Cordoba